Bungalow yendlela yaseBushey - I-Airbnb
Bungalow yendlela yaseBushey
Eli gumbi lipholileyo, igumbi lokuhlambela eli-2 lasekhaya kwiihektare zemithi ezili-10 alikho kude neHubbard Lake. Relax kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho kwi-Alpena County apha. Iimayile ezimbalwa kuphela ukusuka ekukhweleni intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ikhephu, ukutyibilika ekhephini nge-XX, ukuhamba ngekhephu kunye nokuloba, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa kunye negalufa. Kufuphi ngamakhulu eehektare zomhlaba karhulumente wokuzingela amaxhama okanye iinyamakazi ezincinci.
E-Alpena, umgama omfutshane wokuhamba, ungakonwabela ukutya okusembindini wedolophu, iivenkile ezithengisa utywala, iiwineries, ivenkile, iimyuziyam, iithiyetha, ipaki yokutshiza kunye nolwandle olunesanti.
Ikhaya libonelela ngendawo enoxolo kwiihektare ezili-10 ezenziwe ngamaplanga. Izilwanyana zasendle zihlala zibonwa ngasemva kwendlu, ezibandakanya idekhi encinci. Hlala ujikeleze indawo yokucima umlilo kwaye wose imarshmallows xa imozulu ivuma (iinkuni zinikezelwe).
Indlela yaseBushey yindlela emdaka yelizwe kwindawo yezolimo kunye nemithi. Ibucala kakhulu kunye nesiphelo esifileyo kumacala omabini, kwaye malunga neekhilomitha ezimbini ukusuka kwindlela egangathiweyo.